PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - ‘Akumele ihlangane nepolitiki inkolo’
‘Akumele ihlangane nepolitiki inkolo’
Isolezwe - 2017-10-12 - IZINDABA - ZIMASA MATIWANE
IPOLITIKI nokholo akufanele kuhlangane. Lona ngumyalezo wabefundisi bamahlelo ahlukene kubaholi be-ANC abagaqele isikhundla sokuhola le nhlangano asebedume ngokugasela emasontweni ukuze bagaye ivoti.
UCardinal Wilfrid Napier ongu-Archbishop wamaRoma aKhatholika, eThekwini uthe amasonto akufanele asetshenziselwe ukugaya ivoti ngoba ipolitiki nokholo akuhlangani.
Uveze ukuthi amakholwa angamalungu ezinhlangano ezihlukene zepolitiki ngakho ukuvumela inhlangano eyodwa ukuthi izokhuluma esontweni akwakhi isithombe esihle.
Kulezi zinyanga ezimbalwa kubonakale uDkt Nkosazana Dlamini Zuma noMnuz Cyril Ramaphosa bevakashela amasonto ahlukene beyogaya ivoti.
UDkt Dlamini Zuma ubonakale eSt Catherine eseBulwer lapho amukelwa khona ngemuva kokubuya emsebenzini wakhe wokuba nguSihlalo we-AU Commission.
Kule nkonzo kwakukhona uSihlalo we-ANC KwaZuluNatal uMnuz Sihle Zikalala owayezokweseka uDkt Dlamini Zuma esho nokuthi bafuna ahole i-ANC.
UDkt Dlamini Zuma uphinde waba semiseni ebeliseMariannhill ngoJulayi lapho ebekhuluma ngezinhlelo zakhe zokuhola i-ANC njengomuntu wesifazane. Ngalokunye uhlangothi uRamaphosa waphoxwa ngamakholwa ase-Jan Kempdorp, eCalspan eNorthern, Cape, emsola ngokusebenzisa inkonzo yawo ukuheha abantu.
UNapier uthe isonto akufanele lizihlanganise namaqembu epolitiki. “Umthetho webandla awusivumele ukuthi silekelele osopolitiki emikhankasweni yabo ngoba amakholwa angamalungu amaqembu ehlukene. Kufanele kube yisonto elikhuzayo uma sekonakele ezweni hhayi ukuthi kube yilona eliseka osopolitiki abafuna izikhundla. Inkolo akumele ihlangane nepolitiki,” kusho uNapier.
Uthe kwaba yiphutha ukuvunyelwa kukaRamaphosa noDkt Dlamini Zuma ukuthi bagaye ivoti emamiseni amaRoma. “Sizoyidingida le ndaba yokusetshenziswa kwamamisa ukugaya ivoti ngoba iphambene nomthetho webandla. Sizoyixoxa emhlanganweni wethu ozoba ngesonto elizayo. Ukugaya ivoti asikuvumeli ebandleni, esikuvumayo wukuthi osopolitiki bakhulume ngezinhlelo ezisiza umphakathi hhayi ngezinhlangano zabo.”
UMengameli weSouth African Hindu Sabha, uMnuz Ashwin Trikamjee uthe izindawo zokukhonza akufanele zisetshenziselwe ukugaya ivoti.
“Ipolitiki nokholo akuhlangani. Awusoze wathola osopolitiki bezokhankasa ezindaweni zokudumisa zamaHindu,” kusho uTrikamjee.
UMnuz Thokozani Mncwabe okhulumela abaseBuhleni uthe ngeke bakwazi ukuphawula ngalolu daba.